Mụta iji otutu ngwa ngwa na ihuenyo Split Screen Tool | Esi m mac
Learningmụta iji dị iche iche na ihuenyo ngwa na gbawara n'etiti ihuenyo ngwá ọrụ
Otu n'ime ihe ndị m na-amasịkarị banyere Mac bụ Mission Control. Ngwaọrụ a adịla na sistemụ kọmputa Apple kemgbe ọtụtụ afọ, ma ọ bụ ruo mgbe ikpeazụ na e gosiri mgbe ọ ghọrọ usoro.
Mgbe anyị na-ekwu maka mgbanwe nke Mission Mission, anyị anaghị ekwu maka mgbanwe na arụmọrụ ya ma ọ bụ na ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Ihe merenụ bụ na usoro Mac dị ka sistemụ iPad iOS weputara ohere nke ịrụ ọrụ ihuenyo n ’ụzọ dị mfe karị.
N'okwu anyị, na isiokwu a, ihe anyị chọrọ bụ ichetara ndị ọrụ niile ịdị adị nke Njikwa Mission na ohere nke ijikwa ihuenyo ahụ mgbe emere ngwa ahụ, ha mepee na desktọọpụ a kapịrị ọnụ, jikwaa nkuku ndị na-arụ ọrụ ma ọ bụ windo otu site na ngwa.
Ugbu a, ihe isiokwu a bụ ihe anyị chọrọ igosi gị bụ ihe ị ga - eme ka ị nwee ike ịnwe ngwa abụọ na - eghe oghe n’enweghị ike iji aka gị gbanwee ha, nke dị otu a 27-inch iMac 5K anyị nwere ike itinye aka na 5 ngwa nwee ike ịrụ ọrụ n'ime nke ọ bụla n'ụzọ a na-anara nke ọma.
En MacOS anyị nwere ike ịmegharị windo nke ngwa nke akpaka na-akpaghị aka na agbanyeghị na sistemụ dịka Windows adịworị adị ogologo oge, na Macs erubeghị. Ka o si dị gị mma n’ihe anyị gwara gị, ihe ị ga - eme bụ naanị pịa bọtịnụ ihuenyo zuru oke na windo ndị ahụ ma hapụ ya ka ọ pịa.
Nkesa ihuenyo na-egosi na akpaghị aka na ihuenyo ka ị nwee ike ịchọta windo ebe ị na-agbanye bọtịnụ ihuenyo zuru oke na aka nri ma ọ bụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ. Buru n'uche na inwe ike arịlịka a window n'otu akụkụ nke ihuenyo ị ga-enwerịrị opekata mpe windo abụọ dị maka na uzọ ọzọ agbanwere mgbanwe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Learningmụta iji dị iche iche na ihuenyo ngwa na gbawara n'etiti ihuenyo ngwá ọrụ
N'ikwu eziokwu, ihuenyo ndị gbawara agbawa na mac bụ ñapa, impractical, slow and with usability problems.
Ọ bụ ihe ekwesịrị ị haveomi site na windo, ebe ọ bụ na ọ nwere nghọta karịa.
Nke ahụ na-eche ka arụ ọrụ ya ma ọ bụrụ na ịnweghị windo abụọ, arụmọrụ ya enweghị isi, ọ naghị eme ka ọ dị irè.
Ọ naghị arụ ọrụ na otutu monitors na ịgbatị desktọọpụ. Ikwesiri idozi ihuenyo dị ka oghere dị iche iche, ma enwere ndị na-enweghị mmasị na nke ahụ, dị ka m.
Onye na-agba ọsọ na-adabere na iPhone na Apple Watch Series 2